Vaovao - fenitra ho an'ny fanaraha-maso anesthetic fototra
Komitin'ny niandohana: Paramètre d'exploitation et de logières (Nankatoavin'ny ASA House of Delegates tamin'ny 21 Oktobra 1986, novaina tamin'ny 20 Oktobra 2010 ary nohamafisiny farany tamin'ny 28 Oktobra 2015)
Ireo fenitra ireo dia mihatra amin'ny fikarakarana ny fanatoranana rehetra, na izany aza, amin'ny toe-javatra maika dia ilaina ny laharam-pahamehana amin'ny fiainana. Ireo fari-pitsipika ireo dia mety hihoatra ny fotoana rehetra mifototra amin'ny fitsaran'ilay mpitsabo mpanampy tompon'andraikitra. Natao hamporisihana ny fikolokoloana marary kalitao izy ireo, saingy ny fandinihana azy ireo dia tsy afaka manome antoka ny valin'ny marary manokana. Izy ireo dia iharan'ny fanitsiana tsindraindray, noho ny fiovan'ny teknolojia sy ny fampiharana. Izy ireo dia mihatra amin'ny fanatoranana ankapobeny, fanatoranana amin'ny faritra ary fanaraha-maso ny fanatoranana fanatoranana. Ity fari-pitsipika ity dia tsy miresaka afa-tsy ny olan'ny fanaraha-maso fanadontoana anestia, izay singa iray amin'ny fikarakarana fanatoranana. Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy na tsy mahazatra, 1) ny sasany amin'ireny fomba fanaraha-maso ireny dia mety tsy hahomby amin'ny klinika, ary 2) ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny fomba fanaraha-maso voalaza dia mety tsy hahamarika ny fivoaran'ny klinika tsy voadinika. Ny fanelingelenana fohy amin'ny fanaraha-maso † mitohy dia mety tsy azo ihodivirana. Ireo fenitra ireo dia tsy natao hampiasaina amin'ny fikarakarana ny marary miteraka amin'ny fiterahana na amin'ny fitantanana ny fanaintainana.
1. fenitra I
Ny mpiasan'ny fanatoranana manam-pahaizana dia tokony ho ao amin'ny efitrano mandritra ny fanatanterahana ny fanatoranana ankapobeny, fanatoranana isam-paritra ary fanaraha-maso fanatoranana fanaraha-maso.
1.1 tanjona -
Noho ny fiovana haingana amin'ny toe-pahasalaman'ny marary mandritra ny fanatoranana dia tokony ho eo hatrany ny mpiasan'ny fanatoranana manam-pahaizana hanara-maso ny marary ary hanome fikarakarana fanatoranana. Raha misy izany dia misy loza fantatra mivantana, ohatra, taratra, mankany amin'ny fanatoranana
mpiasa izay mety mitaky fandinihana lavitra miserana ny marary, tsy maintsy atao ny fepetra sasany hanaraha-maso ny marary. Raha misy ny vonjy taitra dia mitaky ny tsy fisian'ilay olona tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanatoranana, ny
Ny fitsarana tsara indrindra momba ny fanatoranana dia hampiharina amin'ny fampitahana ny vonjy taitra amin'ny toe-pahasalaman'ny marary anestezia sy amin'ny fisafidianana ilay olona avela ho tompon'andraikitra amin'ny fanatoranana mandritra ny fotoana tsy maha eo azy.
Mandritra ny fanatoranana rehetra, ny oxygenationan'ny marary, ny rivotra, ny fivezivezena ary ny mari-pana dia tokony hojerena tsy tapaka.
2.1.1 Tanjona -
Mba hiantohana ny fifantohana oksizena ampy ao amin'ny entona entona sy ny ra mandritra ny fanatoranana rehetra.
2.2 Fomba -
2.2.1 Entona entanin'ny aingam-panahy: Mandritra ny fitantanana anesthesia ankapobeny amin'ny alàlan'ny milina fanatoranana, ny fatran'ny oksizenina ao amin'ny rafi-pisefoana marary dia horefesin'ny mpandinika oksizenina miaraka amin'ny fanairana voafetra ambany ny fatran'ny oxygen. *
2.2.2 Ny fitrandrahana ra: Mandritra ny fanatoranana rehetra, dia ampiasaina ny fomba fikajiana ny oxygenation toy ny pulse oximetry. mpiasan'ny ekipan'ny fikarakarana fanatoranana. * Mila fanazavana tsara sy fampisehoana ny marary mba hanombanana ny loko. *
3.1 tanjona - Mba hiantohana ny rivotra madio amin'ny marary mandritra ny fanatoranana rehetra.
3.2 Fomba -
3.2.1 Ny marary rehetra mahazo fanatoranana amin'ny ankapobeny dia tokony hanana ny fahaizan'ny ventilation manombatombana hatrany. Ireo fambara klinika mahomby toy ny fitsangatsanganana an-tratra, ny fandinihana ny kitapo miaina fitahirizana ary ny fihenan'ny fofonaina dia ilaina. Ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fisian'ny dioksidan'ny karbaona efa lany daty dia hatao raha tsy voamarin'ny toetran'ny marary, fomba na fitaovana.
Entanina mafy ny fanaraha-maso ny habetsahan'ny entona lany daty. *
3.2.2 Rehefa ampidirina fantsona endotracheal na sarontava laryngeal dia tokony hamarinina amin'ny alàlan'ny fanombanana ara-pahasalamana sy ny famantarana ny dioksidan'ny karbaona ao anaty entona lany daty ny fametrahana azy marina. Ny famakafakana dioksidan'ny karbônina any an-dranomasina maharitra, ampiasaina hatramin'ny fotoan'ny fantsom-panafody endotracheal / saron-tava laryngeal, mandra-pahatongan'ny fitrandrahana / fanesorana na fanombohana famindrana any amin'ny toeram-pitsaboana aorian'ny fandidiana, dia hatao amin'ny alàlan'ny fomba fatra tahaka ny capnography, capnometry na spectroscopy betsaka. *
Rehefa ampiasaina ny capnography na ny capnometry, ny tabilao CO2 farany ambony dia hohenoin'ny mpitsabo fanatoranana na ny mpiasan'ny ekipa fikarakarana fanatoranana. *
3.2.3 Rehefa fehezin'ny rivotra miditra amin'ny rivotra ny rivotra, mila mampiasa fitaovana tsy tapaka izay afaka mamantatra ny fikatonan'ny singa ao amin'ny rafi-pisefoana. Ny fitaovana dia tsy maintsy manome famantarana azo henoina rehefa mihoatra ny ambaratonga fanairana.
3.2.4 Mandritra ny fanatoranana isam-paritra (tsy misy fanalefahana) na fanatoranana eo an-toerana (tsy misy fanalefahana), ny fahamendrehan'ny rivotra dia manombatombana amin'ny fandinihana hatrany ireo famantarana ara-pahasalamana qualitative. Mandritra ny sedation antonony na lalina ny fahaizan'ny ventilation dia hojerena amin'ny alàlan'ny fandinihana hatrany ny famantarana ara-pahasalamana ara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ny fisian'ny dioksidan'ny karbaona entona raha tsy voasakana na tsy manankery amin'ny toetran'ny marary, fomba na fitaovana.
4.1 Tanjona - Hiantohana ny fahafenoan'ny fiasan'ny marary mandritra ny fanafody fanatoranana rehetra.
4.2 Fomba -
4.2.1 Ny marary rehetra manana fanatoranana dia tsy maintsy aseho tsy tapaka hatramin'ny alohan'ny anesthesia mandra-piomanana handao ny toerana fanatoranana. *
4.2.2 Ny marary rehetra manana fanatoranana dia tokony hanana tosidran'ny arterialy sy tahan'ny fo voafaritra ary voadinika farafaharatsiny isaky ny dimy minitra. *
4.2.3 Ny marary rehetra mahazo fanatoranana ankapobeny dia tokony hanana, ankoatra izay voalaza etsy ambony, ny fizotran'ny fivezivezena mandinika hatrany farafaharatsiny iray amin'ireto manaraka ireto: palpation of a pulse, auscultation of heart oro, monitoring of a trace of intra arterial pressure, ultrasound peripheral fanaraha-maso pulsa, na pulsa
plethysmography na oximetry.
5. TEMPERATURE LATRA
5.1 Tanjona - Manampy amin'ny fitazonana ny mari-pana mety amin'ny vatana mandritra ny fanatoranana rehetra.
5.2 Fomba - Ny marary rehetra manana fanatoranana dia tsy maintsy arahi-maso ny mari-pana rehefa misy fiovana lehibe eo amin'ny mari-pana amin'ny vatana, kasaina na ahiahiana.
† Mariho fa ny "mitohy" dia faritana ho "miverimberina matetika ary matetika mifandimby tsy tapaka" fa ny "mitohy" dia midika hoe "maharitra tsy misy fanelingelenana amin'ny fotoana rehetra."
* Amin'ny toe-javatra mangeja, ny manam-pahaizana momba ny fanatoranana tompon'andraikitra dia mety miala amin'ny fepetra takiana amin'ny asterisk (*); soso-kevitra fa rehefa vita izany dia tokony holazaina toy izany (ao anatin'izany ny antony) ao anaty naoty ao amin'ny firaketana ny marary.
Fotoana fandefasana: 27-07-21